Amsterdam Kafeega Xashiishadda Dhibaato • Daroogada Inc.eu
Dukaamada qaxwada ee xashiishadda Amsterdam oo dhibaato ku jirto
Milkiilayaasha kafeega xashiishadda ee Amsterdam ayaa aad uga xumaaday iyadoo duqa magaaladu uu ku dhawaaqay qorshe muran dhaliyay oo lagu mamnuucayo dalxiisayaasha ajnabiga ah ka dib khasaaraha ka dhashay cudurka faafa ee coronavirus.
Dalxiiska Nederland ayaa si weyn u saameeyay Wadaag 19-aadxannibaadda masiibada iyo safarka. Mid ka mid ah meheradaha ugu caansan Nederland ee dalxiisayaasha waa dukaamada qaxwada xashiishadda Amsterdam.
Iyada oo ku saleysan xogta CBS, waxaa la soo sheegay in rubuc -labaad ee sannadkan, wareejinta hoyga iyo cunnadu ay 52,6% ka sarreysay isla rubuc -sannadka 2020 - laakiin marka ay timaaddo isbarbar -dhigga isla muddadaas 2019, wareejinta hadda 35% hoose.
Mid ka mid ah shaqaalaha Coffeeshop ee Barney ayaa dhawaan yiri: “Dhab ahaantii waxay ahayd sanad xasilloon. Dabcan way ka wanaagsan tahay marka la barbardhigo xagaagii la soo dhaafay sababta oo ah fayraska corona, iyada oo uu bilaabay inuu mashquul noqdo sannadkan, laakiin weli waxba ma jiraan marka loo eego sanadihii ka horreeyay. ”
Mid kale, oo ah macmiil iyo maareeyaha tafaariiqda ee Green House, ayaa ka hadlay sida dukaamada qaxwada xashiishka ay dhib badan u soo mareen 18 -kii bilood ee la soo dhaafay.
Sababtoo ah cudurka faafa ee coronavirus, shirkaduhu waxay waayeen malaayiin dalxiisayaal ajnabi ah maxaa yeelay ma soo geli karaan dalka. Xayiraadaha qaarkood ayaa weli khuseeya warshadaha dalxiiska, sidaa darteed dukaamada qaxwada ayaa wali ka maqan dakhli badan oo suuragal ah.
Dhibaatooyinka degmada ka haysta dukaamada qaxwada cannabis ee Amsterdam
Ka sokow cawaaqibka masiibada, ganacsatada ayaa sidoo kale ka walaacsan duqa Amsterdam Femke Halsema iyo soo jeedinteeda.
Duqa magaalada - iyo qaar kale oo badan oo dalka ah - ayaa ku doodaya in dukaamada qaxwada ay dhibaato ku noqdeen dadka maxalliga ah maxaa yeelay suuqa xashiishadda ayaa “aad u weyn oo aad u kululaatay”. Tani waxay dhalisay baaqyo ku aaddan dib -u -habayn si suuqa looga dhigo mid la maareyn karo.
Marwo Halsema: “Amsterdam waa magaalo caalami ah waxaana dooneynaa inaan soo jiidanno dalxiisayaasha, laakiin waxaan dooneynaa inay yimaadaan sababtoo ah hodannimadeeda, quruxdeeda iyo hay’ado dhaqameedkeeda.
“Dukaamada qaxwada, gaar ahaan bartamaha, ayaa inta badan ku socda dalxiisayaal. Kordhinta dalxiiska ayaa kaliya kordhisay baahida, oo soo jiidata dambiyada daroogada ee adag. ”
In kasta oo xashiishaddu ay sharci darro ka tahay waddanka, haysashada ilaa shan garaam (0,18 wiqiyadood) oo dawada ah ayaa lagu xukumay 1976. Intaa waxaa dheer, iibinta alaabada xashiishadda ee goobaha shatiga leh (dukaamada qaxwada) waa loo dulqaadan karaa.
Ilaha ao BarneysAmsterdam (EN), Canex (EN), CNBC (EN, Green House ()EN), TheBharatExpress (EN)
Amsterdamcannabisdukaanka kafeegago'aan qaadashoNederlandsiyaasadda
Jarmalku wuxuu hadda gaadhay guul muhiim ah oo ku saabsan aagga ay ku taalo caasimadda ganacsiga iyo warshadaha xashiishka sii kordhaya ...
Soo saaraha sigaarka Marlboro ayaa billaabay bilyan shirkad cannabis ah
Altria, soo saaraha noocyada sigaarka sida Marlboro iyo Lucky Strike, waxay maalgashi xoog leh ku sameysaa xashiishadda. Shirkadda Mareykanka ...